Kuzviparadzanisa: Inguva Yekuenda Kushanda | Martech Zone
Uku ndiko, kupfuura kusahadzika, iyo isina kujairika bhizinesi nharaunda uye ramangwana risinganetseke randakaona muhupenyu hwangu. Izvo zvakati, ndiri kutarisa mhuri yangu, shamwari, uye vatengi vachipatsanurwa kuita akati wandei matraki:
Hasha - izvi, pasina mubvunzo, zvakaipisisa. Ndiri kutarisa vanhu vandinoda uye vandinoremekedza mukutsamwa kungopopotera munhu wese. Haisi kubatsira chero chinhu kana chero munhu. Ino ndiyo nguva yekuva nemutsa.
kuremara - vanhu vazhinji vane mira uone mafungiro izvozvi. Vamwe vavo vakamirira kununurwa… uye ndinotya kuti hapana achavapo kuti aite izvozvo.
basa - Ndiri kutarisa vamwe vachichera mukati. Nemvura yavo yekutanga yemari yatsemuka, vari kutsvaga dzimwe nzira dzekupona. Iyi ndiyo maitiro angu - ndiri kushanda siku nesikati pakusimudza dzimwe nzira dzemari, kucheka mitengo, uye kuwedzera zviwanikwa zvandakasiya.
Nezvitoro nemahofisi zvakavharwa kuti zvinyoronyoro runyoro uye daro pachavo munharaunda kuti vadzikise kupararira kwe Utachiona hunokonzera corona, vanhu havana imwe sarudzo kunze kwekugara pamba. Kunyangwe izvi zvichigona kuviga mabhizinesi mazhinji, ini handigoni kubatsira asi kushamisika kuti sei makambani asiri kuita pemipata uye kutora mukana wenguva ino kufunga, kugadzira, nekushandisa.
Mumwe wevatengi vangu vakakosha aifanira kundirega ndiende kunotsvaga mari yavo iyo inoenderana chete nezvikoro. Iye CEO akandidaidza pachezvangu kuti nditsanangure mamiriro ezvinhu. Aifanira kuchengetedza kambani yake. Handina mubvunzo kuti ichi ndicho chisarudzo chakakodzera uye ndakamuudza kuti, pasina muripo, ndaizowanikwa chero shanduko kana kuitiswa kwaizovabatsira.
Uyu mutengi chaiye akangovhura yakananga-kune-mutengi chigadzirwa. Isu tanga takanonoka uye nemaune kusasimudzira chigadzirwa kuyedza nekuvandudza mashandisiro uye kuona kuti yakanyatsobatanidzwa mukugadzirwa kwavo kwekufambisa. Ndakagovana nechikwata chake kuti ino yanga iri nguva yakakwana yekutsika gasi, zvakadaro. Heino chikonzero:
Zvishoma Kukanganiswa - nemapfupa vashandi uye mashoma maodha anouya, kuvhura yekushambadzira otomatiki software kusimudzira chigadzirwa ichave isinganyanye kuvhiringidza mukati kune vashandi vavo. Ivo vanogona zvirinani kubata kuwanda kwenyaya pakutangisa icho chitsva chigadzirwa uye matsva masisitimu ekuchitsigira.
Nguva Yefundo - nevashandi vanoshanda kubva kumba, vasingakwanise kuenda kumisangano, uye vasingavhiringidzwe nenyaya dzehofisi, vashandi vane nguva inoshamisa yekuenda kunodzidziswa nekushandisa mhinduro dzavanoda. Ndakagadzira mademo ekuti vashandi vemukati vapinde uye ndikurudzire vatengesi vangu kuvabatsira kuronga nguva yekupinda.
Maitiro Ekushandisa - Handitende kuti tichazombodzokera bhizinesi semazuva ese mushure mechiitiko ichi. Takatarisana nekuderera kweupfumi pasi rose, kutarisa kwakakodzera kwekuparadzanisa macheni edu ekupa, uye zvingangodaro kudzingwa mabasa kuchengetedza makambani kubva pasi. Ino inguva yakakwana yemakambani kudyara zvakanyanya uye kugadzirisa kwavo kufambiswa kwemabasa kuitira kuti vagone kuenderera nekugadzira vachidzikisa mutengo.
Makambani: Inguva Yekuenda Kushanda
Ini ndaikurudzira kambani yega yega kunze uko kuti iende kubasa. Vashandi vako vari kushanda kubva kumba, vane kubatana, uye vanogona kuve vakabatikana kuita uye kudzidzisa pamapuratifomu matsva. Kubatanidza uye kuita zvikwata zvinonyanya kushanda kure mazuvano, saka makondirakiti akagadzirirwa zvisina kumboitika kuti akubatsire. Kambani yangu, Highbridge, iri kuuya nemamwe mazano ekubatanidza ekusangana nehungwaru mhinduro dzekubatsira makambani ane nzvimbo dziri kure dzebasa.
Vashandi: Inguva Yekutevera Remangwana Rako
Kana iwe uri munhu ane mubhadharo uri munjodzi, ino ndiyo nguva yekuti usvetuke. Dai ini, semuenzaniso, ndaive bharandari kana server ... ndinenge ndichisvetuka online uye ndichidzidza hunyanzvi. Unogona kumirira kubvisirwa mari, asi izvo zororo ... kwete mhinduro yenguva refu kumatambudziko ako. Muindasitiri yehunyanzvi, izvi zvinogona kunge zviri kusaina mahara Trailhead kosi paSalesforce, kutora makodhi emahara emakodhi pamhepo, kana kudzidza kuvhura shopu yako paEtsy.
Ino haisi nguva yePlaystation neNetflix. Ino haisi nguva yekutsamwa kana kuoma mitezo. Hapana anogona kumisa hasha dzaAmai Zvisikwa. Ichi kana chimwe chiitiko chine njodzi chaive chisingadziviriki. Ino inguva yekutora mukana wehupenyu hwedu hwezuva nezuva kukanganiswa kuenda kumberi. Vanhu nemakambani anotora mukana izvozvi vachamuka nekukurumidza kupfuura zvavaifunga.
Tags: kushandisa michinacoronavirusCOVID-19kukanganisadzidzopandemicdenda rekupindura